Muxuu ka yiri David Silva kooxda Manchester United, kahor kulanka Manchester derby? – Gool FM
(Manchester) 09 Nof 2018. Kubad sameeyaha Manchester City ee David Silva ayaa sheegay in ay ixtiraam buuxda ka helayaan kooxda ay daris wadaaga yihiin ee Manchester United, kadib markii ay Sky Blues kaga dhameesatay horyaalka Premier League boos kaga sareeya Red Devils 5-tii xili ciyaareed ee lasoo dhaafay.
Manchester City ayaa Axada ku marti galin doonta Etihad Stadium kooxda ay daris wadaaga yihiin ee Manchester City, si ay u wada ciyaaraan kulankooda 12-aad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan.
David Silva ayaa kahor kulankan la hadlay shabakada “ESPN” wuxuuna yiri: “Waa rikoor aad u wanaagsan inaanan ku dhameysan meel ka hooseysa Manchester United, tan iyo markii uu kooxda ka dhaqaaqay Alex Ferguson, sidaasi darted waa cadeyn fiican”.
“Manchester derby wuu isbadalay tan iyo markii aan halkan imid, kadib guushii 6-1 ahayd ee garoonka Old Traford sanadii 2011 wax walba ayaa isbadalay tan iyo xiligaas”.
“Marka ay halkaan inoogu yimaadaan si aan u wada ciyaarno, ama meel kasta, waxay inoo muujinayaan ixtiraam heer sare ah”.
Raheem Sterling oo Heshiis dheer oo Qaali ah qalinka ugu duugay Man City...(Imise ayuu Usbuucii qaadanayaa??)